လိင်ဈေးတန်းမှာ နင်းခြေခံလိုက်ရတဲ့ပန်းကလေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » လိင်ဈေးတန်းမှာ နင်းခြေခံလိုက်ရတဲ့ပန်းကလေး
Posted by ကိုကိုလူဆိုး on Oct 1, 2011 in Copy/Paste | 19 comments
နအဖက ဖွဲ့စည်းပေးထားခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသမီးရေးရာ ကော်မတီကနေ ထိုင်း – မြန်မာနယ်စပ်ကို အလုပ် လာလုပ်ကြတဲ့ အမျိုးသမီးလေးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပညာပေး ဇာတ်လမ်းတစ်ခုကို ဇူလိုင် (3) ရက်နေ့က မြန်မာ့အမျိုးသမီးများနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ပြသခဲ့ရာမှာ အတော်ကို သဘာဝတရားနဲ့ ယုတ္တိ နည်းပါးလွန်းတယ်လို့ ဝေဖန်စရာတွေ ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။
“ပထမဦးဆုံး သမီးကို ဖာရုံမှာ မထားသေးပါဘူး။ သူတို့ခေါ်တာ ဘာလဲမသိဘူး။ ပါကင်ဖောက်တယ်ဆိုလား ဘာလဲ မသိဘူး။ အဲဒီနေရာကို ပို့လိုက်တယ်။ အဲဒီနေရာကို ပို့လိုက်လိုက်ချင်းမှာပဲ လူကြီးတစ်ယောက်က ပါကင် စပြီး ဖောက်တယ်။ သမီးကပြောတယ်၊ အဲဒီလူကြီးကို ကျမကို ဘာလုပ်မှာလဲလို့ မေးမိတယ်။ အဲဒီဦးလေးကြီးက နင့်အတွက် ငါ ပိုက်ဆံ ပေးပြီးသွားပြီ၊ နင့်ကို ငါကြိုက်သလို လုပ်လို့ရတယ်လို့ ပြန်ပြောတယ်။ အဲဒီမှာ ကျမက ပုန်ကန်တော့ ရိုက်နှက်ပြီး လုပ်တယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီမှာ ကျမကို3ခါလား မမှတ်မိတော့ဘူး – ပါကင်ဖောက်တယ်။ ဖောက်ပြီးတော့ ဖာရုံက ဖာခေါင်းမက လာပြန်ယူပြီး သူတို့ရဲ့ ဒါလင်ရုံမှာ အလုပ်လုပ်ခိုင်းတယ်။ အပြင်လည်း မထွက်ရဘူး။ အပြင်ထွက်ဖို့ နေနေသာသာ ပြတင်းပေါက်တောင် မကြည့်ရဘူး။ ကြည့်မိရင် ရိုက်တယ်။ ထမင်းလည်း ၀အောင် မကျွေးဘူး။”
“သမီးဘ၀က အဲဒီ ဧည့်သည် ခေါ်သွားတဲ့နေ့က အဆိုးဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီဧည့်သည်က ဒါလင်ရုံကနေ ခေါ်သွားပြီး ပြန်မပို့ဘူး။ သမီးစိတ်ထင်တယ်။ သမီးတော့ သေပြီလို့။ လမ်းသရဲတွေလား မသိဘူး။ တောင်ယာထဲမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ လူနှစ်ယောက်က သမီးကို တောထဲမှာ တွေ့သွားတယ်။ ဓားကြီးနဲ့။ သမီးစိတ်ထင်နေတယ် – ငါတော့သေပါပြီလို့။ အဲဒီလူနှစ်ယောက်က သမီးကို ခြေတွေ လက်တွေမပြီး ခေါ်သွားတယ်။ သမီး အော်ဟစ်နေမိတယ်။ သမီးကို ဘာလုပ်မလို့လဲ၊ သမီးမှာ ပိုက်ဆံလည်း မရှိပါဘူး။ ဘာလိုချင်လို့ ခေါ်သွားရတာလဲလို့ အော်ဟစ် တောင်းပန်နေမိတယ်။ အဲဒီလူနှစ်ယောက်က သမီးကို တဲတစ်ခုကို ခေါ်သွားတယ်။ တဲကိုရောက်တော့ လူ (6) ယောက်လောက် စ်ရှိမယ်၊ သမီးကိုဝိုင်းပြီး တစ်ယောက်တစ်လှည့် အဓမ္မ ပြုကျင့်ကြတယ်။ ”
“သမီးဒါလင်ရုံကို ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ ပြည့်တန်ဆာခေါင်းမက မေးတယ်။ နင်ဘာလို့ နှစ်ရက်တောင် ကြာနေရတာလဲ၊ နင်ထွက်ပြေးတာ မဟုတ်လားဆိုပြီး သမီးကို ရိုက်နှက်ပြန်တယ်။ အခန်းထဲမှာ သော့ခတ်ပြီး ထားတယ်။ ထမင်းလည်း မကျွေးဘူး။ (10) ရက် ကြာသွားတယ်။ သမီးရဲ့ ဘ၀တူ သူငယ်ချင်းတွေက စားစရာတချို့ လာခိုးကျွေးကြတယ်။ သမီး သူတို့ကို ပြောခဲ့ပါတယ်။ နင်တို့ကျေးဇူး ငါမမေ့ပါဘူးလို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလို (10) ရက် ကြာပြီးတဲ့ အချိန်မှာ သမီးထွက်ပြေးဖို့ လုပ်ခဲ့တယ်။ သမီးဘ၀က ဒီထက်ပိုပြီး ဆိုးစရာ မရှိတော့ဘူးလေ။ သမီး အဲဒီတိုက်ကနေ ခုန်ချထွက်ပြေးမယ်။ သေချင်လည်း သေပါစေဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့မိတယ်။ သမီး မနေနိုင်တော့ဘူး။ သမီး ခုန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။”
အခုလို ပြည့်တန်ဆာလောက အကြောင်းကို ပြောပြနေပေမယ့် သူမမှန်းသိရင် (ပြသနာ) ရှာကြလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ ကြောက်စိတ်တွေ လည်း ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ မဲဆောက်မြို့ကို ကိုယ်ဝန်နဲ့ ပြန်ရောက်လာချိန် အခြေအနေကို ပြောပြရာမှာတော့ – “မဲဆောက်ဈေးကို သမီး ပြန်ရောက်လာတော့ ကိုယ်ဝန်နဲ့လေ၊ ကလေးကလည်း ဘယ်မှာမွေးရမှန်း မသိ၊ ကျောင်းသားဆေးခန်း (မယ်တော်ဆေးခန်း) က ဆရာမကြီးတစ်ယောက် ဟင်းသီးဟင်းရွက် လာဝယ်ရင်း သမီးကိုဈေးမှာ တွေ့သွားတယ်။”
“သမီးကို သူက မေးတယ်၊ သမီး နင်ဘယ်မှာ ကလေးမွေးမှာလဲလို့ မေးတယ်၊ နင်ဘယ်မှာ နေသလဲတဲ့၊ ယောက်ျား ကတော့ နောက်အိမ်ထောင် ပြုသွားပြီလို့ ပြန်ပြောပြခဲ့တယ်။ ဒါဆိုရင် မနက်ဖြန် ဆေးခန်းကို လာခဲ့ဆိုပြီး ကားခနဲ့ ထမင်းစားဖို့ ဘတ် (၁၀၀) ပေးသွားတယ်။ ဆေးခန်းကို သွားတော့ ဆရာမက ကိုယ်ဝန်ကိုလည်း ကြည့်ပေးတယ်။ သွေးလည်း စစ်ပေးတယ်။ သမီးသွေးက နောက်အပတ်ဆို ရောဂါရှိမရှိ သိရမယ်လို့ ပြောပြီး ပြန်လွှတ်လိုက်တယ်။ နောက်အပတ်ကျတော့ ဆေးခန်းကို သမီးပြန်လာခဲ့တယ်။ ဆရာမကြီးနဲ့ တွေ့တော့ သမီးမှာ ရောဂါပိုးရှိတယ်လို့ ပြောပြတာကို ကြားရတယ်။ သမီးတကိုယ်လုံး တောင့်သွား သလို ဖြစ်ရတယ်။ သမီးလန့်သွားပြီး ရင်တွေလည်း တုန်ယင်သွားမိတယ်။ ရောဂါပိုးရှိရင် သမီးလည်း မကြာဘူး၊ သေရလိမ့်မယ်။ ဗိုက်ထဲက မွေးလာတဲ့ ကလေးကကော သမီးမရှိရင် သူဘယ်သူနဲ့ နေမလဲဆိုပြီး သမီးအမျိုးစုံ တွေးတောနေမိတယ်။”
“သမီးက ဆရာမကြီးကို ဘာရောဂါပိုး တွေ့လဲလို့ မေးမိတယ်။ ဆရာမကြီးက စိတ်မပူပါနဲ့ သမီးရယ်တဲ့။ ကာလသားရောဂါဟာ ကုရင်ပျောက်ပါတယ်တဲ့၊ အဲဒီမှာ ဆေးလည်းထိုးပေးတယ်။ ဆေးလည်း သောက်ခိုင်းတယ်။ ဒီလိုနဲ့ သမီးဟာ ကလေး မွေးဖွားဖို့ရက် နီးကပ်လာခဲ့တယ်။ ကလေးကို ကျောင်းသားဆေးခန်းမှာပဲ သွားမွေးခဲ့တယ်။ ကလေးမွေးတဲ့ နေ့ကတော့ သမီးဘ၀မှာ ၀မ်းအနည်းဆုံးပဲ။ သမီးဘေးမှာ လူတစ်ယောက်မှ မရှိကြဘူး။ မွေးလာတဲ့ ကလေးကိုကြည့်ပြီး မျက်ရည်ပေါက်ပေါက် ကျခဲ့ပြီး ဒီလိုခံစားမှုမျိုးကို သမီးဘယ်လိုမ ပြန်ပြောလို့ မရနိုင်တော့ပါဘူး။ ဆရာမတွေက ကလေးမွေးပြီးကာစ သမီးကို ထမင်းဆာမယ်ဆိုပြီး ထမင်း ယူလာကျွေးတယ်။ ထမင်းတစ်လုပ်မှ စားလို့မရအောင် သမီးရင်ထဲမှာ မွန်းကြပ်နေခဲ့တယ်။”
ချိုချိုစမ်းလို ကလေးပြည့်တန်ဆာလေးတွေ ထိုင်း – မြန်မာနယ်စပ်မှာ ဘယ်လောက် အရေအတွက်အထိ ရောက်နေကြပြီလဲ — ။
ချိုချိုစမ်း ရဲ့ 
နိုင်ငံခြားမှာ ငွေရှာရလွယ်တယ် .. နိုင်ငံခြားမှာ အဆင်ပြေတယ်လို့ အားလုံးက ထင်နေတာတော့ မကောင်းဘူး ၊ ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေ ရှိတယ်ဆိုတာ သိရမယ်
ဒီလိုအဖြစ်မျိုး နောက်ထပ်မဖြစ်အောင် တကယ်အရေးကြီးတာက အသိပညာ များများပေးဖို့ပါပဲ
သူများနိုင်ငံမှာ ဒီလို အဖြစ်မျိုးတွေ ဖြစ်နှိုင်တယ်ဆိုတာ မသိပဲနဲ့
ကိုယ့်ကိုကိုယ် မထိမ်းကြောင်းနှိုင်တဲ့ မိန်းကလေးတွေ ဘ၀ပျက်မှာစိုးလို့ အမျိုးသမီးရေးရာက ရိုက်ပြတယ်ထင်ပါတယ် သူတို့ပေါ်လစီ ပါနေတာကတော့ တပိုင်းပေါ့လေ…
မြန်မာအမျိုးသမီး ရေး၇ာက လူပဲတွေ.တယ် လုပ်ကွက်မတွေ.ဘူး ဘာတွေ.များထူးထူး ရှား၂ လုပ်ဆောင်နေလည်း မေးပေးပါဗျို… အလကား ဆန်ကုန်မြေလေးတွေ….အလကား ပြည်သူ ဘဏ်ဓါ ထိုင်ဖြုန်းနေတည်းလူတွေ…
ဖတ်ပြီး ဘာပြောရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူး တကယ်ကို စ်ိတ်မကောင်းစရာပါပဲ
ဖာလောကမှာတောင်မှ မိဘမဲ.ဖာ ဆိုပြီး အချင်းချင်းနှိမ်ကြသေးတာလား လူတွှေများ အဆင်.အတန်းကို အောက်ဆုံးထိ လိုက်ခွဲတယ်နော်
အဲဒါတွေရဲ့တရားခံကဘယ်သူဖြစ်မလဲ ဆင်ရဲမွဲတေမှုရဲနောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တွေက ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာ…
သူ့အကြောင်းလေး ဖတ်ပြီး စိတ်တွေ မွန်းကြပ်နေမိပါတယ်၊
စဉ်းစားကြည့်ပေးကြပါ၊ အကယ်၍ ကျုပ်တို့ ခင်ဗျားတို့ ဆွေမျိုးသားချင်း
ဒါမှမဟုတ် ညီမငယ် ဖြစ်နေခဲ့ရင် ….
စိတ်မကောင်းစရာပါပဲဗျာ ။ စိတ်မကောင်းရုံကလွဲပြီး စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အစွမ်းအစ မရှိသေးတာကလဲခက်တယ် ။ တစ်နေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ …………….. ။
တော်တော်ကြောက်စရာကောင်းပါလားနော်။ ဒီလောက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အ၇ပ်ကိုခုထိမခွာနိုင်သေးပါလား။ အကြောင်းတွေ…အကြောင်းတွေ…
အခု အသက် ၁၅နှစ်ဆိုတော့ ၁၅နှစ် ဆိုတာတောင် တော်တော် ငယ်သေးတဲ့ အရွယ်လေးပဲ ရှိသေးတယ်။
သူ့ဘ၀ ဒုက္ခခပ်သိမ်းက လွတ်မြောက်ပြီး အဆင်ပြေပါစေ။
ပညာတတ်တဲ့ လူတွေက အမျိုးသား စိတ်ဓါတ်နဲ့ နီးစပ်ရာ အသိပညာ ဖြန့်ပေးသင့်တယ်လို့ ထင်တယ်။
တော်တော်ဆိုးဝါးရက်စက်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေပဲ။ ဘယ်သူ့ကို အပြစ်တင်ရမလဲ။
ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးမျိုးတွေ နောက်နောင်မဖြစ်ရလေအောင်၊ တားဆီးနိုင်အောင် ဗဟုသုတရှိသူတွေက အကြံဥာဏ်ကောင်းလေးတွေ ရေးပေးကြရင် ကောင်းမယ်။ တစ်ယောက်တစ်လက် တတတ်တအားဆိုသလို ကိုယ်သိသလောက် ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဖြန့်ဝေပေးခြင်းဖြင့်လည်း အခုလို အဖြစ်ဆိုးတွေ လျှော့ပါးသွားနိုင်မယ်လို့ ထင်မိတယ်။
ထိုင်း က ကလေးပြည့် တန်ဆာကိစ္စ ကိုမရှင်းနိုင် သေးခင်ပြည်တွင်းမှာအရင်ရှင်းသင့် တယ် ။
ဒီလိုကလေးပြည့် တန်ဆာတွေကို ပဲခူးမြို့ မှာတွေ့ နိုင် တယ် ၊ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ခေါ် ထားလဲမသိဘူး ။
ပဲခူးမြို့ လယ် ဈေးနားတဝိုက်မှာယောင်ချာချာနဲ့ ရပ်နေကြည့် ၊ခေါင်းတစ်ယောက်ယောက်ကလာမေးပါ
လိမ့် မယ်။ဘာတဲ့–မြေမနင်းသားဆိုလားဘာဆိုလား–ပဲခူးမှာ ဆိုရှယ်လစ်တို့ မှော်ကန် တို့ ဆိုတာဖာသိပ်ပေါတာ—-
ဒီဇတ်လမ်းကို.. မြန်မာပြည်ထဲက.. သိန်းသောင်းလှူနေတဲ့ အလှူရှင်တွေကို ထပ်ခါပြောပြချင်မိပါရဲ့.။
When I was young ( about 15 yrs ago ),
I also encountered those Myanmar teenage girls both in Myanmar & Thailand.
One even boasted to me that
“her mother recently boughtanew bicycle for her,
its colour is red & it is very beautiful &
that’s why her middle school friends envied (jealous) to her”.
( In fact, her mother bought this bicycle from the money, she got it from sacrifice of her 1st virginity ( packing ) )
Normally, I don’t believe other’s saying very easily,
(especially from those Commercial Sex Workers) &
Let’s say, I was very difficult to persuade from other.
But, that time, I had no doubt about her saying.
Because, I can clearly see her sincerity & adolescent in her eye & talk & body too.
I don’t know, I can still useaword “innocence” for her.
At that time, she don’t know,
What was happened to her.
How her life will end up / lead to.
The only thing she knows is “she haveavery beautiful bicycle” &
she was very very happy for that.
I felt really sad for her & also for Myanmar.
Sometimes, I evaluate myself,
encounteredalot of sad stories of poor Myanmar ( like this ) push me to say extreme.
Pardon me, I didn’t mean rude,
I want to stimulate the patriotism of Myanmar &
I just want my Myanmar fellow ;
to try/work very very hard to escape from this vicious circle.
But, don’t forget, “အမေ ဘယ်လို သိပ်သိပ် ကိုယ်အိပ်မှပျော်မယ်”
အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ ကလေးဖြစ်ရတယ်လို့ ။
တချို့ ကမိဘတွေ ကိုယ်တိုင်ကရောင်းစားကြတယ်..။
တချို့ ကမိဘမဲ့ ဘ၀မလို့ အဒေါ်တွေက ရောင်းစားကြတယ်။
အ၀ါရောင်ဝတ်ကြတဲ့ ရပ်ကွက်ထဲ ကလူတွေ ကော်ပီကူးပြီးအရင်ဝေမယ်….
ဖတ်ရတာ စိတ်မသက်မသာ ရှိလိုက်တာဗျာ…
ရင်ထဲလဲ တော်တော်လေးကို မကောင်းပါဘူး…
ဖတ်ရင်းနဲ့ စိတ်မကောင်းဖြစ်လွန်းလို့ မျက်ရည်တောင် ဝဲမတက်ပါပဲ
အသက်(13) နှစ်ဆိုတဲ့ အရွယ်ဟာ ကလေးသာသာလေးပါပဲ
သူ့မှာ အသက် (15) နှစ်နဲ့ ကလေးမွေးပြီး ဒုက္ခတွေရောက်နေလိုက်တာ ဘယ်လောက်ခံစားရမလဲ ……
ဒီလို ဆိုးဝါးလှတဲ့ ဘဝတွေထဲကနေ အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေ ………..
ကြားရတာ စိတ်မကောင်းစရာပဲ….ဘာမှလုပ်မပေးနိုင်တဲ့ 109-110 အကြောင်းမပြောစမ်းပါနဲ့ဗျာ…..